ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း 10 အောင်မြင်တဲ့ချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၏အမြင်နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းတဲ့အခါသင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အချမှတ်ထားသောပန်းတိုင်များအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်. တကရေရှည်ဆက်ဆံရေးသည်နှင့်ပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့့ gateway လျှင်နေ့စွဲတစ်ခုတည်းကိုသာအောင်မြင်တော်မူသောသောသူတို့သည်ရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်အိပ်ရာထမဆုံးခဲ့ပါလျှင်အခြားသူများကတကဘေးဥပဒ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,. အချို့အတွက်, သူတို့တစ်တွေကောင်းခဲ့လျှင်အချိန်ရက်စွဲတစ်ခုအောင်မြင်. အောက်ပါအကြံပြုချက်ပေါက်ကွဲမှုသို့တစ်ခုချင်းစီရက်စွဲကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်အာမခံချက်မရှိဖြစ်ပေမယ့်, သူတို့မုချသင်သည်သင်၏ချိန်းတွေ့ရှုံးနိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချပေးကူညီကြမည်.
မည်သည့်အခြားပရောဂျက်နဲ့အတူသကဲ့သို့သင်တို့သို့ပါဝင်ပတ်သက်ရ, သင်ချိန်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသို့မဟုတ်ရက်စွဲကိုယ်တိုင်ကထဲကသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အာမခံချက်ပေးသင့်. သင်တစ်ဦးတည်းရှိတဲ့တညဉ့်အခါရပ်တည်ချက်ရှာလျှင်, သင်သည်သူ့ကိုသူ / သူမနှင့်အတူသင်၏အသက်တာ၏ကျန်ဖြုန်းသွားလျှင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များကိုမဖော်ထုတ်နိုင်.
သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လိုပါလျှင်, ရရှိနိုင်သောဖြစ်ပုံရသည်သူမည်သူမဆိုချိန်းတွေ့ကြပါဘူး. အလားအလာရှိသောနေ့စွဲများစာရင်းထဲကနေသင်ဘုံမှာဘယ်ကိုမျှမရကြတော်မူသောသူအပေါင်းကိုပယ်ဖြတ်.
တစ်ဦးကရက်စွဲသင့်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုဖေါ်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းမရ. သဘာဝကျကျအက်ဥပဒေနှင့်သင်အမှန်တကယ်ထက်သင်သည်အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ရန်မကြိုးစားပါဘူး, သင်ကရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှာဖွေနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. သမ္မာတရားကိုနောက်ဆုံးမှာထွက်လာကြလိမ့်မည်နှင့်အခြားထောင်ချောက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်.
အအောင်မြင်ဆုံးရက်စွဲများရိုးရှင်းသောများမှာ, ပေါ့ပေါ့တန်တန်သူများ. ဒါကြောင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးလုံးဝပင​​်မျက်စိကန်းရက်စွဲမယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားများကိုစဉ်းစားသင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအယူခံအံ့သောငှါစိတ်ကူးများ oriented အချို့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတက် လာ..
ပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာစကားပြောခန်းသို့လွန်ခဲ့သောမဆောင်ခဲ့ပါနဲ့တဲ့အလေ့အကျင့်သို့သင့်ရဲ့မအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးကိုခန့်စောဒကမဖွင့်. ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုမိတ်ဖက်ယင်းတို့၏နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုမျှဝေဖို့အရေးကြီးတယ်နေစဉ်, အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးဖြစ်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစေလို. အနာဂတ်တွင်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဘာသာရပ်ဖြစ်သည်. သင်နှင့်သင့်ချိန်းတွေ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်ဦးစလုံးထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာပါသည်မဟုတ်လျှင် up ပြုလုပ်မဆောင်ခဲ့ပါနဲ့.
နေပါစေလူဘာပြောတာလဲ, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအသွင်အပြင်နှင့်အထွေထွေရိုက်ချက်လောက်အမြဲဖြစ်. ထိုကွောငျ့, ညီကိုယ့်ကိုကိုယ်စီစဉ်: အချို့ပေါ်တွင်တင်တက်အောင်, သင်တို့အပေါ်မှာအကောင်းမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုခုဝတ်ဆင်နှင့်ပြုံး. သို့သော်, သင်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေကြသည်စဉ်းစားသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မရပ်တန့်ကြပါ.
သင့်ရဲ့နေ့စွဲဟန်ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်နေပါစေ, လက်တွေ့ကျရှိနေဆဲ. ခုတင်သို့မခုန်ပါနဲ့, အနည်းဆုံးမပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်. အကယ်. တူညီသောရုပ်ရှင်ကြိုက်မိလို့မင်္ဂလာဆောင်နှင့်ကလေးများအကြောင်းပြောနေတာဖွင့်မထားပါနဲ့.
နေ့စွဲပြင်ဆင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာသန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းများမပါဝင်ပါဘူး, ကောင်းမွန်သောအကြိုင်တွေ, smart ရှာဖွေနေ. သင်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အချိန်းတွေ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်တာရှည်အဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ဒါကြောင့်စကားပြောသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစား.
အပြင်ပန်းအ ကျော်လွန်. Go
လူစမတ်ဖြစ်ဖို့ဟန်ဆောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့, ရိုးသားမှုနှင့်တစ်ခုတည်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်မဆိုလိုပေ. ရီစရာကောင်းတာကအရာအားလုံးနှင့်လူတိုင်း suspecting မပါဘဲ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်ဗေဒင်သမားထွက်ဆိုတာတွေ့ရဖို့နဲ့မလုံလောက်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ကြိုးစား.
သင်ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု၌ရှိကြ၏ဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှအမှုအ, စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လာမကမင်းကိုမပါဘူး. သင်တို့ပတ်လည်လူတိုင်းချိန်းတွေ့အောင်မြင်မှုကိုသင်တို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပါဘူး. နောက်ထပ်, သင်ချိန်းတွေ့မှတပါးတခြားလူမှုရေးဘဝရှိပါကသင်သည်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ထင်ရလိမ့်မယ်.